Ihe nkwụnye ọkụ na mpụga Odị O - Ngwongwo mgbasa ozi maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
A na-eji Odị O mee ihe naanị na Thailand. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke ụwa nke ụwa na plugs / soket ha dị iche iche)
Odị O soket na plọg, nke a gbara akara na 16 amps, bụ ọkwa gọọmentị na Thailand. E mere usoro plọg ahụ na 2006, mana ojiji adịghị ebe niile. A na-eji nwayọọ nwayọọ amalite ya. A kọwara ọkọlọtọ ahụ na TIS 166-2549.
Odị O mejupụtara ntụtụ ike abụọ na ntụtụ ụwa, nke gbara okirikiri ma nwee dayameta 4.8. Igwe ọkụ ahụ na-amị 19 mm n'ogologo, ha nwere aka uwe ogologo 10mm ma ebe etiti ha dị 19 mm. Ntụtụ ụwa nwere ogologo 21.4 mm. Oghere dị n'etiti etiti ahụ n’agbata pinti etiti na etiti etiti ahịrị ndị na-ejikọ ike abụọ ahụ bụ 11.9 mm, nke bụ otu ụzọ ahụ dị na ụdị B plọg. Nke a abụghị ihe dakwasịrị, ebe ọ bụ na ngwakọ ụdị nke oghere a ka emeburu ịnabata plọg ụdị A, B, C na O. N’ikpeazụ, a na-eme atụmatụ ikwekọrịta na plọg ndị America, ebe ọ bụ na netwọkụ eletrik na Thailand na-arụ ọrụ na 230 V. Ọ bụ ezie na ha yiri otu, ụdị ụdị plọg na-enweghị mgbanwe na Israel. ụdị H ma ọ bụ Danish ụdị K plọg ike. Agbanyeghị, enwere nkwekọrịta na-enweghị nchebe n'etiti sodị sọta na ụdị E/F plọgị, nke a bụ ihe kpatara gọọmentị Thai machibidoro ire ere ngwa dabara adaba E/F plọg. Mgbe ejiri ya na Thailand, ihe E/F nkwụnye ahụ agaghị agha ime ala ma ọ bụrụ na adọkpụpụ ụdị plọg a, ị ga-enwe ike imetụ aka ahụ mgbe ha ka dị ndụ!
Nwere onwe onye ị nwere ike ime ka m mata ihe kpatara ya n’ụwa a ọ ga --ewepụta ụdị plọg na pọọdụ ọhụụ mgbe enwere ọtụtụ ụzọ dịnụ. Nhazi usoro ụdị mba ụwa N (ma ọ bụ, maka nke ahụ), usoro nkwụnye ọkụ ọzọ gbakwunyere na nke dabara na ya ụdị C, dị ka F or E) pụtara n'ezie onwe onye. Dị ka gọọmentị Thai ga-ewepụ nkwenye na plọg ụdị A na B na agbanyeghị, gịnị kpatara na ha ejighi ụdị N ọkwa, ebe n'otu oge na-enye ohere maka oge ntụgharị ebe ngwakọ B/ N-receptacle yana ụdị N sockets nwere ike ịwụnye? Nke a bụ ihe na-agba ume!